Ropeway Nepal: April 2013
काठमाडौं, १९ वैशाख- गएको वर्ष (२०६८) झन्डै १० लाख यात्रुले मनकामना नेपाल केबलकार चढेका छन् । केबलकार चढ्नेको यो संख्या २०६७ भन्दा झँडै १ लाख ५० हजारले बढी हो ।
यात्रु संख्या वृद्धिसँगै मनकामना केबलकारको कारोबार रकम र नाफा पनि बढेको छ । मनकामना केबलकार प्रालिका अनुसार १० लाख यात्रुबाट २६ करोडभन्दा बढी आम्दानी भएको छ ।
“अघिल्लो वर्षभन्दा स्वदेशी तथा विदेशी दुवै यात्रु बढेका छन्,” मनकामना केबलकार अप्रेसन इन्चार्ज सुनील कर्माचार्यले भने । माओवादी द्वन्द्व सकिई शान्ति–प्रक्रिया सुरु भएपछि केबलकार चढ्ने यात्रुको संख्या बढ्दै गएको छ ।
मनकामना नेपालको एकमात्र यात्रु बोक्ने केबलकार हो । काठमाडौंदेखि करिब १ सय किलोमिटरमा रहेको केबलकारबाट मनकामना मन्दिर दर्शन र मनोरञ्जनका लागि यात्रु जाने गर्छन् ।
२०६८ मा ९ लाख ८२ हजार ४ सय ८७ जनाले केबलकार चढेको तथ्यांक छ । कर्माचार्यका अनुसार केबलकार यात्रा गर्नेमा स्वदेशी ६० र विदेशी ४० प्रतिशत छन् ।
२०६७ मा ८ लाख ३८ हजार स्वदेशी तथा विदेशी पर्यटकले केबलकार यात्रा गरेका थिए । त्यस्तै, २०६६ मा ६ लाख ७९ हजार १ सय ८५ तथा ०६५ मा ५ लाख ९२ हजार ६ सय ५ ले यात्रा गरेको तथ्यांक छ ।
विगतमा १५ प्रतिशतमै सीमित हुने गरेको विदेशी पर्यटकको संख्या अहिले ४० प्रतिशतमा पुगेको छ । “अझै पनि केबलकार यात्रा गर्ने अधिकतम यात्रु स्वदेशी नै छन्,” कर्माचार्यले भने ।
यो मौसममा अत्यधिक गर्मी बढ्ने भएकाले भारतीय पयर्टक मनकामनालगायतका पर्यटकीय स्थलको दर्शन गर्न आउँछन् । विगतका दिनमा दैनिक २ हजारले केबलकार यात्रा गर्दै आए पनि अहिले बढेर ३ हजार नाघेको जानकारी उनले दिए ।
हालसम्म ६७ लाख यात्रुले केबलकारबाट आवातजावत गरेको तथ्यांक कम्पनीसँग छ । चितवनको कुरिनटारदेखि मनकामना मन्दिरसम्मको केबलकार दूरी ३.१ किलोमिटर छ ।
स्वदेशीका लागि प्रतियात्रु टिकट दर हाल ४ सय २५ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । गत वर्ष भने ३ सय ९० रुपैयाँमात्रै थियो । स्थानीय व्यक्तिलाई भाडामा केही सहुलियत छ ।
सार्क मुलुकभित्रका पर्यटकलाई स्वदेशी यात्रुसरह टिकट मूल्य पर्छ भने त्यसबाहिरका पर्यटकले प्रतिटिकट १५ डलर तिर्नुपर्छ । कर्माचार्यका अनुसार विगत वर्षमा २४–२५ करोड रुपैयाँबराबरको कारोबार हुन्थ्यो । अहिले यात्रुसँगै कारोबार रकमको ग्राफ उकालो लागेको छ ।
केबलकारबाट हुने कुल कारोबारको १ प्रतिशत रकम स्थानीयले पाउने गरेका छन् । केबलकारले समेट्ने क्षेत्र चितवनको दारेचोक (कुरिनटार) र गोरखाको मनकामना नमुना गाविसले वार्षिक २५ लाख रुपैयाँसम्म पाउने गरेको कर्माचार्यले बताए । “स्थानीयलाई चौबीसै घण्टा आपतकालीन सेवासमेत दिइएको छ,” उनले भने ।
यो केबलकारले गोरखाको मनकामना धार्मिकस्थललाई जोडेको छ । २०५५ सालमा स्थापित केबलकारको लागत ४३ करोड थियो । स्थापनाको सात वर्षभित्रै लगानी उठाइसकेको जानकारी कर्माचार्यले दिए ।
साउन र भदौ महिना केबलकार यात्रुका लागि ‘अफसिजन’ मानिन्छ भने असोजदेखि पुनः सिजन सुरु हुन्छ । यात्रु सवारका लागि ३१ वटा केबलकार र सामान ढुवानीका लागि तीन फ्रेट क्यारियर छन् । यी केबलकार चलाउन ४ हजार ४ सय किलोवाट विद्युत् खपत हुन्छ । विद्युत्बापत कम्पनीले मासिक ३ लाख रुपैयाँ बुझाउने गरेको छ । एजेन्ट बनेर टिकट बेच्ने व्यवसायीले प्रतिटिकट ५ देखि १० प्रतिशत कमिसन पाउँछन् ।
वर्ष यात्रु संख्या
स्रोत : मनकामना केबलकार प्रालि
भारतीय पर्यटकको सङ्ख्या २५ प्रतिशत
गत आर्थिक वर्ष २०६८/६९ मा केबलकारमार्फत ९ लाख ६५ हजार पर्यटक गोरखाको धार्मिक पर्यटकीय तीर्थस्थल मनकामना मन्दिर भित्रिएका छन् । ती पर्यटकहरू नेपाल तथा भारतका भएको मनकामना दर्शन प्रालिका सहायक स्टेशन म्यानेजर उज्ज्वल शेरचनले जानकारी दिए । केबलकारबाट मनकामना दर्शन गर्नेको सङ्ख्या हरेक वर्ष १० प्रतिशतका दरले बढ्दै गएको सो कम्पनीले बताएको छ ।
शेरचनले भने, ‘केबलकारबाट मनकामना जानेमा भारतीय पर्यटकको सङ्ख्या भने २५ प्रतिशत रहेको छ ।’ उनका अनुसार पशुपतिनाथको दर्शन गरी पोखरा भ्रमणका लागि जानेमध्ये अधिकांश पर्यटक मनकामना भ्रमणका लागि जाने गरेका छन् । पोखरा जाने बाटोमा पर्ने र राजमार्ग नजिकैबाट केही मिनेटमा जान सकिने भएकाले पनि त्यसरी जानको सङ्ख्या बढेको उनको भनाइ छ ।
मनकामना भ्रमण गरिसकेका भारतीय पर्यटकहरूले फर्केर मनकामनाबारे जानकारी दिएकाले पनि भारतीय पर्यटकको सङ्ख्या बढेको हुनसक्ने उनले बताए । ‘हामीले अफसिजनमा आन्तरिक पर्यटकको सङ्ख्या कम हुने गरेकाले सङ्ख्या बढाउनका लागि केही वर्षअघि भारतका टेलिभिजन च्यानलहरूमार्फत प्रचारप्रसार गरेका थियौं’, सहायक म्यानेजर शेरचनले भने, ‘त्यसयता भने भारतीय पर्यटकले नै आफ्नो क्षेत्रमा मनकामना र केबलकारबारे प्रचार गरिदिएकाले सजिलो भएको छ ।’
मनकामना आएका भारत, मध्यप्रदेशका राजु मिश्राले साथीहरूमार्फतआफूले मनकामनाबारे थाहा पाएको र पशुपतिनाथको दर्शनपछि मनकामना दर्शन गरेर पोखरा जान लागेको बताए । भारतबाट आउने पर्यटकमा गैरहिन्दूको सङ्ख्या पनि निकै रहेको छ । मुस्लिम धर्मावलम्बीहरू पनि केबलकार चढ्न र मन्दिर दर्शन गर्नका लागि जाने गरेको स्थानीय व्यवसायीहरूले बताए । मनकामनामा होटल व्यवसाय गर्दै आएका दीपक श्रेष्ठका अनुसार ठाउँ हेर्न र केबलकारको आनन्द लिनकै लागि पनि गैरहिन्दूहरू मनकामना आउँछन् । सामान्यतः असोजदेखि वैशाखसम्मको समयलाई केबलकारको सिजन मानिन्छ ।
Posted by Quality King at 12:47 AM No comments:
Although the Tribhuvan Highway was crucial, it followed an extremely difficult hill alignment that was not easy for loaded vehicles. In 1964AD with the help of US govenment,anew ropeway system was completed which ferried material from Hetauda to Teku (National Trading).The ropeway helped cut travel time, was cheaper to run and above all, was not affected by weather.
The Hetauda-Teku ropeway was not the first ropeway by all means. It was built to replace the old ropeway built by chandra Shumshere which ferried goods from Dhorsing near Bhimphedi to Matatirtha in the Valley. Tri Chandra Nepal Tara Ropeway was opened in 1927 withacapacity of eight tons per hour. Indian freight was transported from Raxaul to Amlekhgunj by train-that 48km railway was another one Chandra Sumshere's ideas. Cargo was taken to Dhorsing by lorry and then the ropeway hauled it to Matatirtha.
In its glory days, the 42km Hetauda-Kathmandu cargo ropeway/ghiring used to run 10 hours and transport 22 tons of goods every day.
The construction of Highways and cheaper fuels for the vehicles in those days [and mismanagement of government people] caused the ropeway to lose its charm and it stopped its operation in 1994. It did serve the valley for the last time by transporting vegetables and other food products when the flood washed away both part of the Tribhuwan and Prithivi Highway in 1993AD.
Today, due to the skyrocketed fuel prices and because of the relatively unstable terrain of the area, many study shows that transport of goods through rope-way is cost effective. But the old Hetauda-Kathmandu rope-ways have been lost beyond repairs and it's old towers left to rust in peace. We can still see the reminiscences of the rope-way in various parts of Kathmandu including Kuleswor area
Posted by Quality King at 7:10 PM No comments:
History of Nepal Transport 1953
Posted by Quality King at 7:07 PM 1 comment:
NGR (Nepal Government Railway). Note the letters N. G. R. on the side of the engine. The bus service ran from Kathmandu till Amlekhgunj because travelers took the train from Amlekhgunj to Birgunj and Raxaul. The train service stopped in the mid-1960s.
Posted by Quality King at 6:57 PM No comments:
The entrance to the Churia tunnel near Hetauda. The tunnel goes under the Churia mountain range. It is9ft wide, 10 ft high and 785 ft long. The tunnel was built in 1927 and was in use till the early 1960s, after which the highway bypassed it. Nepal Transport's Chevrolet bus wasatight fit in the tunnel.
Posted by Quality King at 6:56 PM No comments:
In order to transport the goods easily from India to Nepal, the Ranas built two railway systems Raxual- Amlekhgunj (NGR) and Jayanagar-Janakpur-Bijalpura (NJJR). The Raxaul-Amlekhgunj railway shown in the photo was built with the help of the British in 1927 AD
Posted by Quality King at 6:16 PM No comments:
A rope bridge somewhere in the hill in around 1960
It wasn't that there were other trails besides Bhimphedi - Thankot one but the other routes to the capital were longer and far more difficult so it was through this route most of the traveling occurred.
One of the primary difficulty were the rivers. This is one of the rope bridges used for travel in remote part of Nepal
Posted by Quality King at 6:11 PM No comments:
Posted by Quality King at 6:05 PM No comments:
Posted by Quality King at 4:49 PM No comments:
It is said that Shah was attracted with the beautiful valley while he was walking through this hill on his way to maternal uncle´s home in Nuwakot from Makawanpur and developed the concept of unifying the three cities Kantipur (Kathmandu), Bhadgaon (Bhaktapur), and Patan (Lalitpur) with the then Gurkha state. He later entered with his Gorkha Army in Kirtipur via the same hill. The king then attacked and got victory over the Kathmandu Valley.
Posted by Quality King at 3:45 PM No comments:
Mechanized Bridge (River Crossing Cable Car)
3,731 views 1 year ago
Posted by Quality King at 8:57 AM No comments:
Longest Mechanized Bridge (यान्त्रिक पुल) 635m Span
Posted by Quality King at 1:54 AM No comments:
सन् २०१३ को फेब्रुअरीमा हवाईमार्ग हुँदै ४५ हजार १ सय २३ जना पर्यटक नेपाल भित्रिएका छन् । यो सङ्ख्या सन् २०१२ को सोही अवधिको तुलनामा ६ प्रतिशत बढी भएको त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल अध्यागमन कार्यालयले जानकारी दिएको छ । अध्यागमनको पछिल्लो तथ्याङ्कअनुसार गत वर्षको सोही अवधिको तुलनामा यो सङ्ख्या २ हजार ४ सय ७ बढी हो ।
सन् २०१३ को फेब्रुअरीमा ४८ हजार ७ सय ८४ पर्यटक विमानस्थलबाट बाहिरिएका छन् । यो सङ्ख्या नेपाल भित्रिनेकोभन्दा ३ हजार ६ सय ६१ बढी हो । सो अवधिमा विदेशबाट आउनेभन्दा जाने नेपालीको सङ्ख्या पनि १२ हजार ३ सय ५६ बढी देखिएको छ । फेब्रुअरीमा ५८ हजार ३ सय ७९ जना नेपाली विभिन्न मुलुकबाट नेपाल भित्रिएका छन् भने ७० हजार ७ सय ३५ जना नेपाली बाहिरिएको अध्यागमन कार्यालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
फेब्रुअरीमा एशियाली मुलुकबाट नेपाल आउने पाकिस्तानी ४४ दशमलव ३ र श्रीलङ्काली ३५ दशमलव ३ प्रतिशत बढेका छन् भने भारतीय र बङ्गलादेशीको आगमन घटेको छ । सो अवधिमा भारतीय १८ दशमलव २ र बङ्गलादेशी ५ दशमलव २ प्रतिशत घटेको तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
एशियाका अन्य मुलुक चीनबाट आउने पर्यटक १ सय ३५ दशमलव ६ प्रतिशत बढेको छ । चीनबाट ७ हजार ६ सय १ जना पर्यटक हवाईमार्ग हुँदै नेपाल भित्रिएका छन् । यसैगरी, मलेसिया, सिङ्गापुर र चिनियाँ–ताइपेयीबाट आउने पर्यटक बढेको देखिएको छ । यूरोपका अधिकांश गन्तव्यका साथै सामुद्रिक मुलुकबाट आउने पर्यटक आगमन पनि घटेको देखिएको छ
Posted by Quality King at 2:54 PM No comments:
काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौंडा सुरुङमार्गले देशको भविष्य निर्धारण गर्नेछ
अध्यक्ष, नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेड (एनपीबीसीएल)
पूर्वाधार विकासमा सरकारलाई सघाउने गरी पहिलो पटक नेपालको निजी क्षेत्रले राजधानीबाट हेटौंडा जोड्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डको सुरुङमार्ग निर्माण गर्दैछ । यो आयोजना कार्यान्वयन गर्न निजी क्षेत्रकै पहलमा नेपाल पूर्वाधार विकास कम्पनी लिमिटेड (एनपीबीसीएल) स्थापना गरी अध्ययन हुँदैछ, र यसको नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका निवर्तमान अध्यक्ष कुशकुमार जोशीले नेतृत्व गरेका छन् । २२ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी लगानी हुने सुरुङमार्ग आर्थिक एवं प्राविधिक रूपमा सम्भाव्य भएकाले निर्माण गर्न लागेको उनी बताउँछन् । अहिले देशको पूर्वी क्षेत्रबाट राजधानी आउन हेटौंडा–नारायणघाट हुँदै २ सय ३० किलोमिटर दूरी पार गर्नुपर्ने बाध्यता छ । प्रस्तावित सुरुङमार्गले सो लामो दुरीलाई विस्थापन गरी ५० किलोमिटरमा सिमित तुल्याउने जोशीको भनाइ छ । आगामी सन् २०१६ सम्म यो सडक निर्माण पूरा गर्ने लक्ष्य छ । सरकार र एनपीबीसीएलबीच कन्सेसन एग्रिमेन्ट भएपछि तत्काल आयोजना अघि बढ्ने जोशी बताउँछन् । सुरुङमार्ग निर्माणका विषयमा केन्द्रित रहेर जोशीसँग बाबुराम खड्का र विजय देवकोटाले गरेको कुराकानी ः
काठमाडौं–कुलेखानी–हेटौंडा सुरुङमार्गको काम कहाँ पुग्यो ?
एनपीबीसीएलले सुरुङमार्गको विस्तृत अध्ययन पूरा गरिसकेको छ । अब सरकारसँग कन्सेसन एग्रिमेन्ट गर्न मात्र बाँकी छ । हामीले गत जेठ २ गते सरकारसँग प्रारम्भिक परियोजना सम्झौता गरेका हौं । त्यसबेला हामीले छ महिनाभित्र सुरुङमार्गको विस्तृृत अध्ययन प्रतिवेदन (डीपीआर) तयार गर्ने प्रतिबद्धता जनाएका थियौं, र निर्धारित समयभन्दा अगावै प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाइसकेका छौं । प्रारम्भिक सम्झौताअनुसार पहिलो चरणमा यो मार्गको अध्ययनसहित आर्थिक एवं प्राविधिक रूपमा सम्भाव्य देखिए निर्माण अघि बढाउन भनेर सरकारले एनपीबीसीएललाई अनुमति दिएको हो । सरकारसँग कन्सेसन एग्रिमेन्ट हुनेबित्तिकै काम थाल्न हामीले सबै तयारी पूरा गरेका छौं । यो विषयमा भौतिक पूर्वाधार निर्माण यातायात मन्त्रालयमा व्यापक छलफल भएको थियो । त्यसक्रममा सरकारका तर्फबाट उठाएका प्राविधिक पक्षका बारेमा सबै जानकारी दियौं । उहाँहरूको चासो लगानी कसरी जुटाउने भन्नेमा थियो । लगानीका बारेमा पनि हामीले सरकारलाई स्पष्ट पारिसकेका छौं । काठमाडौं–निजगढ द्रुतमार्गसँग जुध्नु हुँदैन भन्ने उहाँको कन्र्सन थियो, त्यसको पनि निराकरण भइसक्यो । किनभने फास्ट्र्याकसँग नजुध्ने गरेर हामीले सरकारलाई अप्सन दिएका छौं । पूर्वाधार विकास ऐनअन्तर्गत पहिलो पटक निजी क्षेत्रबाट व्यापक जनसहभागितासहितको सार्वजनिक–निजी साझेदारी पीफोर प्रारूपमा जाने भएकाले यसलाई प्रोत्साहित गर्नुपर्छ भनेर सरकारलाई भनेका छौं । यो सुरुङमार्ग सफल भए अन्य क्षेत्रमा पनि बाटो निर्माणका लागि ढोका खुल्छ भनेर हामीले सरकारसँग ३५ वर्षका लागि निर्माण सञ्चालन स्वामित्व हस्तान्तर(बुट) नीति अन्र्तगत अनुमति मागेका छौं । आयोजनालाई सस्तो बनाउन र जनताले तिर्ने टोल ट्याक्सलाई कम गर्न कर छुट मागेका छौं । सडक बनेपछि इन्धन खपत घट्ने भएकाले यसमा राज्यले कर छुट दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो । त्यो छुट स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लैजानुपर्ने भएकाले ढिलाइ भएको छ । यो आयोजनामा तत्कालीन प्रधानमन्त्री डा. बाबुराम भट्टराई पनि उत्साहित हुनुभएको थियो, तर तत्कालीन भौतिक योजनामन्त्रीले समय लगाउनुभयो । त्यसबेला उहाँका केही कन्र्सन थिए ।
यहाँले सर्वसाधारणलाई आर्थिक भार कम गर्न भनेर कर छुटको प्रस्ताव ल्याउनुभयो, यो कार्यान्वयन हुनेमा कतिको विश्वस्त हुनुहुन्छ ?
यो सुविधा दिएमा जनता अझ बढी जागरूक हुन्छन्, किनभने यो जनताले पाउने सुविधा पनि हो । स्वदेशी लगानी हुने भएकाले राज्यले छुट दिनुपर्छ भन्ने हाम्रो माग हो ।
यहाँले कर छुट कति माग्नुभएको छ ?
हामीले विभिन्न श्रेणीमा कर छुट मागेका छौं । हाम्रो भनाइ के हो भने राज्यले करमा सहुलियत दियो भने आयोजना अझ बढी आर्थिक रूपमा सम्भाव्य हुन्छ । विदेशी लगानीलाई यो र त्यो यति र त्यति भन्ने छुट मागेको र सरकारले दिइसकेको अवस्थामा यो त स्वदेशी लगानीबाट बन्न लागेको ठूलो सडक आयोजना हो । हामीले सरकारसँग धेरै छुट मागेका पनि छैनांै ।
निजी क्षेत्रले बढी लाभ हुने उत्पादन र सेवा क्षेत्रमा मात्र लगानी गरेको छ, दिगो विकास र उत्पादनको भूमिका रहने बढी लगानीको पूर्वाधार आयोजना बनाउन यहाँले किन रोज्नुभएको हो ?
देशमा पर्याप्त पूर्वाधार विकास नभईकन लगानी ल्याउन सकिन्न । हामीले कर्णाली विकासको जतिसुकै ठूला कुरा गरे पनि स्रोत परिचालन नगरी त्यहाँको विकासको कल्पना गर्न सक्दैनौं । त्यो स्रोतको परिचालन गर्न पूर्वाधारको विकास नभईकन हुँदैन । त्यसैले विकासको पहिलो प्राथमिकता सडक नै हो । सडक, बिजुली, सञ्चार र खानेपानी पूर्वाधार भनेको न्यूनतम आवश्यकता हो । देशमा जनसंख्या वृद्धि भइरहेको छ, बिस्तारै सहरीकरण पनि बढ्दै गएको छ । राजधानीको कुरा गर्दा यहाँ सहरीकरण बढेको छ जनसंख्या बढेर ४० लाख नाघिसकेको छ । खानेपानी बिजुली सडकको समस्या भए पनि सबै अवसर प्राप्त हुने भएकाले यहाँ बस्नुपर्ने बाध्यता छ । अर्को कुरा के हो भने राज्यको राजधानी हरेक क्षेत्रबाट पहुँचमा हुनुपर्छ । हेटौंडाबाट काठमाण्डौको दुरी ३५ किलोमिटर भएपनि काठमाडौं नारायणघाट हुँदै आउन २ सय ३० किलोमिटर घुम्नुपर्ने बाध्यता छ । अब यो कल्पना गर्नुस् कि यो सडक बनेपछि वीरगन्ज र हेटौंडाका मानिसले आरामसाथ छोटो दूरीबाट एक घण्टामा राजधानी आउन सक्छन् । राजधानी सबैको पहँुचमा हुनुपर्छ भन्ने सिद्धान्त राज्यले अपनाउनुपर्छ । राजधानीबाट निजगढ–हेटौंडा–नारायणघाट र नवलपरासीजस्ता क्षेत्र सडकबाट नजिक भएपछि सबै जनता राजधानी आउँदैनन्, जसका कारण राजधानीको जनघनत्व घट्छ र अवसर अन्यत्र पनि बाँडिन्छ । राजधानीको खानेपानी र ट्राफिक समस्या पनि हट्छ । सरकारले मात्र बनाउन सक्दैन, त्यसैले यो सडक बनाउनुपर्छ भनेर हामी लागेका हौं । यसमा एउटा व्यवसायीले पाउने प्रतिफल पनि छ भने अर्कातर्फ अन्य सडकमाथि सवारीको चाप घट्छ । पूर्वपश्चिम, उत्तरदक्षिण सबै क्षेत्रबाट सडक भएपछि राजधानी आउन सहज हुन्छ, त्यसमध्ये एउटा विकल्प हामीले खोजेको हो ।
यहाँले सुरुङमार्गको काम अघि बढाउँदै हुनुहुन्छ, सरकारले त्यही बाटोको समानन्तर हुने गरी यसअघि नै काठमाडांै–निजगढ फस्टट्र्याकको ट्र्याक पनि खोलिसकेको छ, अन्य स्थानमा पनि पूर्वाधार विकासको सम्भावना हुँदाहँुदै यहाँले किन यही ठाउँमा सडक निर्माण गर्न राज्नुभएको हो ?
नेपाललाई नयाँ आयाम दिने र देशको भविष्य निर्धारण गर्ने सडक नै यही हो । पूर्वबाट राजधानी आउने बाटो यही नै हो । यो एउटा सडकको बोटलनेकलाई खोल्नेबित्तिकै यही प्रारूपमा कर्णालीमा, देशको पूर्वपश्चिम, उत्तरदक्षिण सबै ठाउँमा सडक निर्माण सुरु हुन्छ । प्रारम्भिक चरणमा यो एउटा परीक्षणका रूपमा निजी क्षेत्रले बनाउन लागेको हो । बाटोले मानिसको जीवनमा कति सरल गर्न सक्छ र समाजमा कसरी परिवर्तन ल्याउन सक्छ र विकास निर्माणमा बाटोको महŒव कस्तो हुन्छ भन्ने टेस्टकेसका रूपमा पनि यो सडकलाई लिएका हौं । लाभको हिसाबले हेर्दा यो सडकबाट छिटो प्रतिफल प्राप्त हुन्छ । सरकारले बनाएको फास्टट्र्याक भनेको निजगढको विमानस्थललाई लक्षित गरिएको छ भने काठमाडौं–हेटौंडा त्योभन्दा पनि नजिक छ । यो सडकले पश्चिमको ट्राफिकलाई सहज बनाउँछ भने फास्टट्र्याकले पूर्वको । फेरि फास्ट्र्याक राज्यले बनाउने होइन, निजी लगानीमै बन्ने हो । हामीले सडक बनाउन राज्यसँग पैसा मागेका छैनौं । यो सडक समानान्तर पनि होइनन, प्रतिस्पर्धी पनि होइनन्, केवल एक–अर्काका परिपूरक हुन् ।
दु्रतमार्गसँग समानान्तर हुने गरी आयोजना बढाइएकाले नै कन्सेसन एग्रिमेन्ट नदिएको सुनिन्छ, तपाईंहरूले किन सरकारको विश्वास जित्न नसक्नुभएको हो ?
यो बाटो बनाउनुभन्दा अघि हामीले प्रधानमन्त्री कार्यालय, भौतिक मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगमा आशयपत्र पेस गरेका थियौं । २०६३ को ऐनअनुसार सरकारले नै आयोजना छनोट गर्ने हो । यो क्रममा आयोगका उपाध्यक्षलगायतका अधिकारीले बैठकमार्फत नै हाम्रो प्रस्ताव स्वीकार गरेका हुन् । उहाँहरूले बाटो बन्नुपर्छ भन्ने आशयका साथ परियोजना छनोट गरेको बताउनुभएको थियो । नेपाली जनताको लगानीमा बन्ने आयोजना छनोट भई भौतिक योजना मन्त्रालयको प्राविधिक समितिमा गएको हो र त्यहाँबाट पनि आयोजना छनोट भएको हो । मन्त्रिपरिषद्ले पनि निजी क्षेत्रबाटै यो मार्ग बनाउनुपर्छ भनि पास गरेको थियो । कम्पनीले लगानी र प्राविधिकलगायत सबैै कुरा खुलाएर दिइएको थियो । दोस्रो पटक पुनः मन्त्रिपरिषद्ले यो कुरालाई पास गरेको हो । अहिले आएर दु्रतमार्गसँग समानान्तर हुने गरी आएकाले कन्सेसन एग्रिमेन्ट नदिने भन्न पाइँदैन । पहिले नै यसबारेमा स्पष्ट पार्नुपथ्र्यो ।
निर्माण सुरु गर्ने भनिएको दिनमा तपाईंहरूले धर्मपूजा गरेर चित्त बुझाउनुभयो, सरकारले यो आयोजना अघि बढाउँदा समस्या पर्ने नदेखेको भए किन तपाईंहरूलाई अल्झाएको त ?
यो कुरा सरकारले नै बुझ्नुपर्छ । नेपालको विकास अघि नबढ्नुको मुख्य कारण नै यही हो । सरकारले नसकेको अवस्थामा जनताले काम गर्न खोज्दा उत्साह दिनुको सट्टा विभिन्न अड्को खोजेर रोक्न खोज्नु नै सरकारी समस्या हो । जनताले गर्ने काममा त सरकारले प्रोत्साहन गर्नुपर्ने हो । पोखरा र निजगढ विमानस्थलको कुरा यही कारण अल्झिएको छ । फास्टट्र्याकको शिलान्यास २०६६ सालमा भयो, तर ट्र्याकको काम भर्खर सकिएको छ । त्यसैले हामीले आफ्नो लगानी जुटाएर गर्नुपर्ने काममा सरकारले सहयोग गर्नुपर्छ । ६ महिनाबीचमा दक्ष जनशक्ति खर्च गरेर अध्ययन ग¥यौं । यद्यपि अहिले पनि हामीले अध्ययनको काम गरिरहेका छौं । सरकारले एग्रिमेन्ट नदिए पनि हामी हौसिएर काम जारी राखेका छौं । तर, हामी झैं सरकारी निकायमा बसेका मानिसहरू हौसिएका छैनन् । हामीले माघ २६ देखि निर्माणको काम थाल्ने बताएका थियौं । सरकारी निकायले जनताले साइत निकाल्दैमा काम हुन्छ र भन्ने प्रश्न गर्न मिल्छ ? अवश्य मिल्दैन ।
लगानीको समस्याबारे पनि टीकाटिप्पणी भएका छन् नि ?
लगानीमा केही समस्या छैन । नेपालको ७५ जिल्लाका जनताले यो आयोजनालाई नराम्रो देखेका छैन । लगानीको मोडालिटीअनुुसार सबै नागरिकले यो आयोजनामा स्वामित्व पाउनुपर्छ भन्ने हाम्रो धारणा हो । नेपालका अधिकांश आयोजना अरूको स्वार्थमा निहित भएकै कारण अघि बढ्न नसकेको हो । यो आयोजनाका हकमा त्यो कुरा लागू हुँदेन । यो आयोजना मकवानपुरबासीले धेरै पहिलेदेखि उठाएको माग हो । उनीहरू नै यो आयोजनामा लगानी गर्न आतुर छन् र आयोजनाको स्वामित्व लिन पनि तयार छन् । यही सोचका साथ प्रारम्भिक चरणमा हरेक घरबाट संस्थापक सेयर होल्डरका रूपमा सबैले लगानी गर्न सकून् भनेर न्यूनतम १० हजारदेखि सेयर बाँडिरहेका छौं । यो कम्पनी व्यक्ति र संस्थाले होल्ड गर्ने कम्पनी होइन । यो आयोजनाले अरू धेरै काम गर्न सकोस् भन्ने मेरो चाहना हो । यो आयोजनामा नागरिकले भावनात्मक र प्रतिफलका हिसाबले लगानी गरिरहेका छन् । त्यसैले यो आयोजनासँग जनताको भावना पनि जोडिएको छ ।
यो आयोजना बढी नै महŒवाकांक्षी र जनताको भावनासँग जोडिएको छ भन्नुभयो, अहिलेसम्म लगानी प्रतिबद्धताको अवस्था कस्तो छ ?
हामीसँग ३० अर्ब रुपैयाँसम्मको लगानी प्रतिबद्धता छ । विभिन्न संस्थाले पनि लगानी गर्ने जनाएका छन् । नेपाली निर्माण व्यवसायीले पनि यसमा निकै चासो देखाएका छन् र निर्माणको जिम्मा लिन गइरहेका छन् । सरकारसँग कन्सेसन एग्रिमेन्ट हुनासाथ लगानी तुरुन्त जुट्छ । यो आयोजनामा अन्य आयोजनामा झैं जग्गा मुआब्जाको समस्या आउँदैन । किनभने हामीले यसतर्फ उचित व्यवस्थापन गरेका छौं । यति हुँदाहुँदै पनि यो आयोजना अघि बढाउन खोज्दा सरकारी निकायबाट गरिएको ढिलाई हामीले बुझ्न सकेका छैनौं ।
सरकारी संयन्त्रको कुन ओहदामा बसेको कुन व्यक्ति वा निकायले के सर्तमा ढिलाइ गरेको हो, बताउनुस् न त ?
भौतिक योजना, निर्माण तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयबाटै ढिलाइ भएको हो ।
सचिव वा मन्त्री कसले ढिलाइ गरे ?
सचिवज्यूले त काम गर्नुभएको हो, मन्त्रीजीले ढिलाइ गर्नुभयो । प्रारम्भिक चरणमा राखिएको सर्त पूरा गरेका छौं । निजगढको बाटोलाई असर गर्न नहुने र लगानीको पक्षलाई प्रस्ट पार्नुपर्ने सर्त पूरा गरेका छौं । सायद अन्तिम अवस्थामा चुनावी सरकार गठनमा अल्झिएकाले पनि ढिलाइ भएको हुनुपर्छ, तर अन्तिम सत्य के हो भने नेपाली जनताले असल नियतले गर्न लागेको कामलाई यसरी अल्झाउनु हुँदैन ।
रकम लेनदेनको विषयमा कुरा नमिलेको हो ?
पैसाको कुरा आएजस्तो लाग्दैन । उहाँले नै पीपीएमा हस्ताक्षर गरेर दिनुभएको आयोजना हो र सुरुमै उहाँले तपाईंको बाटोमा कुनै ढिलाइ वा रोकावट गर्दिनँ, ऐनअनुसार दिन्छु भन्नुभएको थियो । तर अप्ठ्यारो कहाँनेर कस्तो प¥यो भन्नेबारे केही बुझाइएन ।
उसो भए मन्त्रीले तपाईंहरूलाई के भने त ?
मन्त्रीले सबै प्रक्रियामा सहभागी गराए पनि पछिल्लो समयमा शंकास्पद व्यवहार गर्नुभयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले नै आफ्नै कार्यकालमा म जसरी पनि यो आयोजना सम्पन्न गर्छु भन्नुभएकोमा विभिन्न कारणले उहाँले त्यो काम पूरा गर्न सक्नुभएन । उहाँले हेटौंडा महाधिवेशनबाट उद्घोष गरेको निर्माण र उत्पादनको नारालाई यो आयोजनाले जोड्न सक्थ्यो । अहिले पूर्वकर्मचारीको सरकार छ, उहाँहरूले नागरिकको यो प्रयासलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ भन्ने मलाइ लाग्छ । यद्यपि यहाँसम्म आइपुग्दा कन्सेसन एग्रिमेन्टकै कारण हामी दुई महिना ढिला भइसकेका छौं ।
अहिले त नयाँ सरकार गठन भइसकेको छ, आवश्यक प्रक्रिया बुझेका कर्मचारी छन्, तपाईंहरू प्रक्रिया अघि बढाउनुहुन्छ होला नि ?
हामीले यसबीचमा नयाँ मन्त्रीलाई भेटेका छौं । उहाँले आयोजनाका बारेमा चासो दिनुभएको छ । हामी प्रक्रियालाई अघि बढाउँछौं र मन्त्रीजीले सहयोग गर्नुहुन्छ भन्नेमा हामी विश्वस्त छौं । स्वदेशी लगानीमा यत्रो बाटो बनाउँछु भन्दा पनि विघ्न बाधा आउँछ भने कहिल्यै देशको प्रगति हुँदैन ।
सुरुङमार्ग निर्माणको मुख्य उद्देश्य व्यापारिक लाभ मात्रै हो या पर्यटन र कृषिजस्ता क्षेत्रसँग जोडिएका मुद्दालाई अघि ल्याउनु हो ?
यो बाटोले नेपालको प्रतिपस्र्धी क्षमता बढाउँछ र कामको खर्च घटाउँछ । यो बाटो बनेपछि आधारभूत सामग्रीको भाउ घटाउँछ । साधारण उपभोक्ताले अहिले जुन भाडाको लागत तिरिरहेका छन्, त्यसलाई यो बाटोले घटाउनु भनेको नेपालीका लागि ठूलो कुरा हो । लागत घट्नेबित्तिकै राज्यलाई नै फाइदा पुग्छ । पाँच घण्टाको बाटो ४५ मिनेटमा पार गर्दा इन्धन खर्चमा धेरै कमी आउँछ । इन्धनको खर्च विकास निर्माणका क्षेत्रमा लगानी गर्न सकिन्छ । त्यसैले, यति ठूलो आयोजना हुँदाहुँदै काममा ढिलाइ हुनु निकै दुःखद पक्ष हो ।
आयोजना बनाउन प्राविधिक क्षमता पनि चाहिन्छ, तपाईंहरूसँग यो क्षमता छ त ?
काम नै गर्न नदिइ क्षमतामाथि प्रश्न उठाउनु हुँदैन । यो आयोजनामा सुरुङको काम मात्र केही जटिलजस्तो लागे पनि यसअघि बनेका आयोजनामा विदेशी प्राविधिकसँग नेपालीले काम गरेकाले सजिलै काम गर्न सक्छौं । यो आयोजना निर्माणको नेतृत्व नेपाली निर्माण व्यवसायीले नै गर्छन् । यसो हुनासाथ व्यवसायीमा
आत्मसम्मानको विकास हुन्छ ।
Posted by Quality King at 2:24 PM No comments:
Posted by Quality King at 5:57 PM No comments:
Posted by Quality King at 11:48 PM No comments:
Posted by Quality King at 1:55 AM No comments: